श्रीमान/श्रीमतीमा असमान यौनेच्छा र समस्या - यौन जिज्ञासा र समाधान - साप्ताहिक
म र मेरी श्रीमती दुवै समान उमेरका छौं । हामी अहिले ३२ वर्षका भयौं । हाम्रा दुई सन्तान पनि भैसके । हामी दुवै जना सरकारी जागिरे हौं । हामी दुवैले काम गर्ने स्थान फरक–फरक भए पनि साँझ, बिहान, राति सँगै बस्छौं र खानपानसमेत राम्रै खाने गरेका छौं । घरको काम पनि दुवैले मिलेर गर्दै आएका छौं, यद्यपि हामीबीच यौनसम्बन्धी समस्या छ । म र मेरी श्रीमतीको यौनचाहना फरक खालको छ, मलाई रातको एक–दुई पटक सेक्स गर्न मन लाग्छ, तर मेरी श्रीमती साताको एकपटक मात्र चाहन्छिन् । के यस्तो पनि हुन सक्छ ? हरेक रातको एक पटक मात्र भए पनि सेक्सप्रति उनको चाहना बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? सकिन्छ भने त्यसका लागि के गर्नुपर्ला ? अर्को, मेरो लिंग अलि सानो छ । के मेरो लिंग सानो भएका कारणले गर्दा उनको यौनचाहना पूरा नभएर त सेक्स गर्न मन छैन भनेकी होइनन् ? यसको समाधान के छ ? लिंग ठूलो बनाउन के गर्नुपर्ला ? मेरी श्रीमती मिन्स हुनुभन्दा १०–१२ दिन पहिलेदेखि नै स्तन तथा तल्लो पेट दुख्छ भन्छिन् । अनि छाती समाउन पनि दिन्नन्, अरुको त कुरै भएन । यसको समाधान के होला ? मेरी श्रीमती सुपारी अत्यधिक खान्छिन, त्यसले यौन जीवनमा केही असर गर्छ कि गर्दैन ?
सुपारीको सेवनको सन्दर्भमा तपाईंको शंका त्यसले यौनेच्छाका कमी ल्याउँछ कि भन्ने हुनुपर्छ, तर सुपारीले यौनेच्छा तथा यौन क्षमता बढाउँछ भन्ने मान्यता छ । पानको पत्तासँग नभै अन्य रूपमा खाइएको सुपारीले लिंग उत्तेजनामा केही समस्या ल्याएको पनि एक अनुसन्धानले देखाएको छ, तर पानको पत्तासँग खाइएको सुपारीबाट त्यस्तो देखिएन । सुपारी सेवन गर्नेहरूको यौनकार्यसम्बन्धी नतिजा तटस्थ रहेको उक्त अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यसैले यसलाई यौनेच्छामा आएको कमीको कारण मान्नुपर्ने कुनै आधार छैन ।